सुजिताको घटना अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी भन्छन्, बाहिरका मान्छे आएर यहाँ के गरिरहेका छन् ? हामीलाई सुजिताको परिवार भेट्न समेत दिँदैनन् – Classic Khabar
July 8, 2021 169
सुजिता भण्डारीको मृत्युको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको चितवन प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा आफुहरु निकै समस्यामा परेको बताएका छन् । घटना अनुसन्धानमा अवरोध सिर्जना भएको भन्दै उनीहरुले वाहिर जिल्लाका मान्छे आएर के गरिरहेका छन् ? भन्ने प्रश्न समेत गरे । सुजिता हराए देखि नै उनको परिवारसंग सम्पर्कमा रहेको बताएको प्रहरीले उनको शव फेला परेपछि वाहिरका मानिसको अनावश्यक हस्तक्षेप भएर आफुहरुलाई अनुसन्धानमै समस्या भएको बताएका छन् ।
Nextविनाको प्रेमी भनिएका प्रवेशको बुबा पहिलोपटक मिडियामा : छोराको बारेमा के भने ? विनाको साथीहरु भक्कानिदै खुलाए नयाँ कुरा (भिडियो हेर्नुस्)